Arsenal oo 50 milyan oo doolar dul dhigtey madaxa captain Cesc Fabregas – SBC
Arsenal oo 50 milyan oo doolar dul dhigtey madaxa captain Cesc Fabregas
Kooxda Arsenal ee saldhigeedu yahay waqooyiga magaalada London ayaa markii ugu horeysay waxaa ka soo go’day inay iska iibiso Kaptankeeda reer Spain Cesc Fabregas , iyadoo la sheegay in lagu beecinayo suuqyada kala iibsiga ciyaartoyda ee xagaaga aduun lacageed oo gaaraya 35 milyan oo pound oo u dhiganta 50 milyan oo doolar.
Warar si hoose uga soo baxay garoonka Emirates Stadium ayaa sheegaya in macalin Arsene Wengero aanu xiligan diyaar u aheyn in uu ka dhaadhiciyo Febregas in uu sii joogo waqooyiga London sidii kal hore uu uga raadiyey laabta captain Cesc in uu sii joogo Arsenal ka dib markii uu si weyn u niyad raacay in uu ku laabto halkii markii hore uu ka yimid isagoo wiil yar oo ah kooxda Barcelona. Inkastoo Febregas oo todobaadkii qaata ku dhawaad 200 kun oo doolar hadana heshiiskiisa la joogitaanka Arsenal waxaa uga sii dhiman 4 sano laakiin waxaa la soo sheegayaa in ay adag tahay in lagu qanciyo Cesc in uu kooxda la sii joogo iyadoo arimaha ugu weyn ay tahay koob la’aanta Arsenal haysata mudo 6 sano ah oo ka mid ah 8 sano oo uu ka mid ahaa kooxda.
23 jirka reer Spain waxaa warar hoose sheegayaa in lagu beecin doono 50 milyan oo la siin doono kooxdii soo dalbatada inkastoo isagu niyad ahaan uu aad ugu hamuun qabo in uu ka ciyaaro garoonka Neo Cam, taasi oo sanadkii hore u suurtagali laheyd ka dib markii Barca ay ku baayacdey 40 milyan oo doolar.
Qof ka gaabsadey in magaciisa saxaafada laga sheego oo aad ugu dhaw kooxda Arsenal ayaa sheegay in kooxdu ay aad ugu adag tahay inay sii hayaan Cesc.
Qofkanu wuxuu sheegay Macalin Wenger oo Febregas uu ugu fadhiyo qiimo gaaraya 500 kun oo doolar oo kaliya uu hada ku rabo 50 milyan oo doolar, iyadoo la leeyahay qiimahan oo u muuqanaya mid fara badan wuxuu niyad jab ku ridi doonaa damaca Febregas ee ah i nuu ka tago Arsenal.
Laakiin waxaa la leeyahay Barcelona hada waxay u muuqataa inay ka caaltaagleynayso inay qaadato Febregas iyadoon u daneyneyn sidii xagaagii hore oo kale, maadama mudooyinkii ugu dambeeyey aanu aheyn qaab ciyaareedkii lagu yiqiin.
Inkastoo taasi jirto hadana waxaa shaki laga qabaa in Real Madrid ay isha ku hayso Cesc, wallow isagu uu aad ugu niyadsan yahay in uu dib ugu laabto magaalada uu ka soo jeedo oo ah Barcelona.